Cocktails miaraka amin'ny cognac - fomba fitsaboana ao an-trano miaraka amin'ny cola, champagne, sira ary ronono
Cocktails miaraka amin'ny cognac - hevitra tsara indrindra amin'ny fanomanana zava-pisotro misy alikaola
Cocktails miaraka amin'ny cognac dia ho ankasitrahan'ireo tia ny alikaola isan-karazany. Ny cognac amin'ny tenany ihany dia zava-pisotro mahery, ka noho izany tsy ny rehetra no mankasitraka izany, fa miaraka amin'ny singa hafa toy ny sokatra voankazo, ny fisotroana karbônina ary na ny ronono aza dia lasa mofomamy malefaka sy malefaka ary mahafinaritra.
Ahoana ny fomba hanaovana kôkôly misy kôkaina?
Cocktails miaraka amin'ny brandy ao an-trano dia azo hanina isan-karazany. Matetika dia manomana cocktails mamelombelona miaraka amin'ny fanampiana ny ranomandry, fa indraindray izy ireo dia vita sy mafana amin'ny fanampiana ireo zava-manitra. Ny toro-làlana eto ambany dia hanampy amin'ny fanatanterahana tsara ilay asa.
Cocktails miaraka amin'ny cognac dia ampiasaina aorian'ny sakafo antoandro na ny sakafo hariva.
Ho an'ny fanomanana ny zava-pisotro mamy malaza dia tokony hampiasaina amin'ny kalitao avo lenta fotsiny ihany.
Ny cocktails tsara indrindra amin'ny cognac amin'ny famokarana siramamy na voankazo voarara dia tsara indrindra amin'ny solomaso fofona. Mba hanaovana izany dia napetraka ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny minitra vitsy.
Ny fitaovana fanentanana ho an'ny cocktails dia azo atao mifangaro amin'ny tanana, ary azo ampiasaina amin'ny shaker ianao.
Cognac cocktail miaraka amin'ny cola
Ny cocktail iray amin'ny cola sy cognac dia tian'ny ankamaroan'ny zava-pisotro misy alikaola, izay lasa malaza be tao anatin'ireo taona faramparany. Ao amin'ny version classique, ny cola sy cognac dia mifangaro amin'ny ampahany amin'ny 1: 1. Saingy ity fitsipika ity ihany koa dia mety ho voahitsakitsaka, hampidirana bebe kokoa an'ity ity orinasa ity. Eto ianao dia tokony hifantoka amin'ny tsironao manokana sy amin'ny fomba matanjaka ny vokatra tianao hahazoana vokatr'izany.
Ny glasa dia feno gilasy.
Manaova kônage sy cola ary manompoa.
Ny fisotroana cocktails toy izany miaraka amin'ny cola sy cognac dia mora kokoa amin'ny lantihy lava amin'ny alalan'ny mololo.
Cocktail "Luna" miaraka amin'ny gilasy sy cognac - recipe
Ny cocktail miaraka amin'ny gilasy sy cognac dia manana tsiro mangatsiatsiaka mahafinaritra amin'ny alahelo maivana. Amin'ity tranga ity dia tsara ny mampiasa crème glace tsy misy fanampiana. Manompoa tena tsara amin'ny ranom-boankazo amin'ny alàlan'ny mololo. Raha azo atao, dia afaka mametraka voankazo eo amin'ny sisin'ny fitaratra ianao - mety ho banana, menaka na sarisary mihitsy aza.
ronono - 1 glas;
gilasy - 200 g;
siramamy voa - 50 g;
Ny ronono kilaoty dia voadona miaraka amin'ny voankazo mamy, siramamy sy voankazo voankazo.
Rehefa manomboka matevina sy matevina ny masony dia vonona ny cocktail.
Ny lakolosy toy izany miaraka amin'ny cognac dia ampiasaina ao anaty solomaso fofona.
Cognac cocktail miaraka amin'ny jiro apetraka
Cocktail brandy miaraka amin'ny ranom-boankazo - fisotroana tsotra, saingy tsy dia tian'ny maro izany. Ao anatin'izany toe-javatra izany, araka ny naseho tao amin'ny recipe, ny cocktail dia tsy miezaka mafy loatra, fa tonga dia mora ihany aza. Raha te-hanamafy azy io ianao, dia mila ampiana cognac bebe kokoa. Alohan'ny hanompoana, afaka mandefa gilasy roa ianao amin'ny sitrapo.
japoney japoney - 60 ml;
Ao anaty vilia baoritra misy jirofo, cognac sy sprite.
Ny ao anaty vera dia mihetsika sy manompo.
Sarin-koditra misy kônage
Ny cocktails tsotra miaraka amin'ny cognac dia mety ho voaomana amin'ny fanampiana ny akoho na ny rojo misy papelika. Amin'ity tranga ity dia mampiasa atodin'ny papelika lava, satria mahasalama rehefa mihinana ahitra. Ny atody dia manome ny fahatsapana fitiavan-tena manokana. Raha tsy te hividy tapakila efa vonona ianao dia manana tsiro mahafinaritra, dia tsy azo ampiana intsony ny siramamy na siramamy.
bokon-jaza - 3 sombintsombiny;
siramamy ampiana - 1 teaspoon;
rano karbona - 40 ml;
Voakapoka sy rojo vy ao anaty vera misy lakandrano.
Mandatsaka kômonika izy ireo, Coca-Cola.
Ampio vovoka siramamy na siramamy, rano karbona ary mifangaro tsara.
Ny sisin'ny fitaratra dia voaravaka amin'ny voankazo sy voankazo.
Cocktail champagne miaraka amin'ny cognac
Ny cocktails tsotra miaraka amin'ny brandy ao an-trano dia afaka miomana amin'ny saiky fisotro. Amin'ity tranga ity, dia ampiasao ny ankamaroan'ny champagne. Ahoana no hitrangan'izany - maina, semisweet na mamy, miankina manokana amin'ny safidy manokana sy ny karazana cocktail tianao horaisina vokatr'izany.
champagne - hanandrana.
Manindrona ny atody amin'ny siramamy lavanila sy kognana.
Omeo solomaso ilay volkano ary hameno ny fahatokisan'izy ireo amin'ny Champagny kalsioma.
Cognac cocktail amin'ny ronono
Ny milomamo misy kônôka sy jirofo dia tena mahafinaritra sy malefaka. Raha azo atao dia azonao atao koa ny manampy siramamy lavanila kely, mba hisy tsiranoka manitra manify. Raha tokony ho jiro kiriodra, dia azonao ampiasaina ny hafa, ohatra, poma na loko.
jiro kirizy - 20 ml;
ronono - 40 ml.
Ny cognac dia mifamatotra amin'ny siramamy.
Ao anatin'ilay volavolam-pangatahana voarainy dia mameno ny ronono vonton-tsakafo ary mihetsika tsara.
Cocktails miaraka amin'ny ronono sy kognana dia atao amin'ny lolo lava miaraka amin'ny mololo.
Cocktail miaraka amin'ny cognac sy cream
Cocktails mifototra amin'ny cognac dia mety ho mahafinaritra sy mahafinaritra ny tsiro, toy ny amin'ity tranga ity. Ity kônôka matanjaka ity dia mihalalina amin'ny siramamy matavy sy sôkôla sôkôla. Vokatr'izany dia mahazo zava-pisotro maivana ianao, izay mila manompo aorian'ny sakafo hariva. Ho tsara amin'ny voankazo na gilasy izany.
crème fatty - 30 ml;
chocolat liqueur - 30 ml;
Ice cubes - 2 pcs.
Afangaro ny kônôka miaraka amin'ny menaka matavy.
Manaova lasitra siramamy ary manaingo tsara.
Ny masony vokatra dia natsipy tao anaty vera iray misy ranomandry nipoitra ary avy eo novokarina.
Divay kokay miaraka amin'ny cognac
Misy cocktail mofomamy miaraka amin'ny cognac sy divay dia azo amina ara-bakiteny ao anatin'ny minitra vitsy. Raha mampiasa divay mena ianao, dia tokony hampiana siramamy, mety ho mihoatra noho izay voalaza ao amin'ny recipe. Ary raha maka divay mamy na mamy ny ankamaroany, amin'ity tranga ity, dia tsy maintsy hisy ny siramamy fanampiny hanjavona. Raha tokony ho divay mena dia azonao ampiasaina fotsy, izay mety ho maina na semisweet.
divay mena maina - 200 ml;
siramamy - 2 teaspoons;
Ny siramamy dia natsipy tao anaty vilia.
Mialà sira ary asio siramamy.
Ampio divay, kogna, rano, gilasy.
Mandrobona, arotsaho ao anaty vera ary manompoa, manoritra tsaram-bary.
Hotroka miaraka amin'ny cognac
Ny cocktails misy cognac dia tsy mamelombelona fotsiny, fa mampitony ihany koa. Lasa manan-danja amin'ny ririnina izy ireo. Mampahatsiahy ny divay mena ny cocktail toy izany. Manompoa azy avy hatrany rehefa avy mahandro amin'ny endrika mafana. Mba hamahana an'io tranga io, aza mampiasa solomaso, fa maka manokana. Ankoatra ny fiterahana, azonao atao ny manampy siramamy sy zava-manitra hafa ho anao.
siramamy maitso - 1 teaspoon;
rano mamoaka rano - 50 ml;
kibon'ny felany - 5;
Cognac sy mofomamy whisky, ampio tsimokaretina karazana, zavamanitra hafa, siramamy ary mampihetsi-po, miandrasa mandra-pahavitàny.
Mofomamy rano ary manompoa mofomamy miaraka amin'ny voankazo.
Ny cooler ny pineapple dia fisotroana mamelombelona sy mampahery
Misotroa amin'ny sotrom-bary sy ny menaka
Kvass amin'ny lahimatoa tsy misy leviora
Manome kodiarana maitso mavana amin'ny ririnina
Kvass avy amin'ny sigara ao an-trano - resipe
Smoothies - 9 sakafo matsiro sy mahasoa
Ahoana no fanaovana kafe?
Homemade Apple Dine - Recipe
Taom-baovao tany Vietnam
Ahoana ny hanasana ny ra?
Vato "Rock Wave"
Abaktal - analogues
Apetaham-boaloboka Apple - fampiharana
Sakafo peo miaraka amin'ny ronono akoho
Ahoana no fomba fitsaboana cervicitis?
Ny fianakavian'i Tom Hanks dia tra-doza: ny zanakalahy faralahy indrindra amin'ny mpilalao Oscar-nanjavona dia nanjavona!
Ny dysplasia amin'ny fikajiana hipopotama amin'ny ankizy - ny fomba tsara indrindra hanitsiana ny fitsaboana
Ahoana ny fomba tokony hitondranao ny peratra?
Slipknot miaraka amin'ny tsipìka - amin'ny inona no mampiady an'io lamaody lamaody io?
Sharon Stone sy Angelo Boff malalany dia naneho ny fihetseham-pony teny amoron-dranomasina tany Miami
TOP-25 marika lafo vidy
Ny endriky ny indostria any ivelany
Famaranana ny aretim-pianakaviana
Salady miaraka amin'ny akoho sy katsaka
Jelly avy amin'ny abriko miaraka amin'ny gelatine